MISRED stands with Musona - ZimOnline News
Home » Entertainment » MISRED stands with Musona
Posted by: Dalubuhle Dube in Entertainment, Lifestyle, Sport June 27, 2019	0 948 Views
Media Personality and Brand Ambassador Samantha Musa aka ‘MISRED’ has backed Warriors captain Knowledge Musona after his failure in making scores.
Posting on her twitter handle, MISRED said our captain Knowledge Musona had his bad days and he belonged to us as Zimbabwe. MISRED said Musona was in need of our support in order for him to triumph in the next match between Zimbabwe and Congo.
She added that Musona had contributed much for Zimbabwean to qualify for the AFCON 2019.
“Yesterday was emotional, a lot was said but @Knowledge Musona ndewedu.He has given his heart & soul for us to be even at #Total AFCON 2019.This morning lets show him love &encouragement for our next game he is a vital part of it & he will come out victorious!!#WarriorsCan”,said Musa.
Most Zimbabweans were not happy with Musona who had wasted three chances to make a score.
Previous: ‘Banning of foreign currency will not affect foreign visitors’: Zimbabwe Tourism Authority
Next: Tamy Moyo to perform at Jive Music Festival